दिउँसाे ब्वाइफ्रेन्डसँग डेटिङ, साँझ सुसाइट नाेट लेखेर आ’त्मह’त्या ! - Public 24Khabar
Home News दिउँसाे ब्वाइफ्रेन्डसँग डेटिङ, साँझ सुसाइट नाेट लेखेर आ’त्मह’त्या !
सल्यान शारदा नगरपालिका १ श्रीनगरकी १८ वर्षीय अस्मिता बुढाले सुसाइट नाेट लेखेर आफ्नै घरमा झुण्डिएर आ त्म ह त्या गरेकी छन् । आफ्नाे प्रेमिले धाेका दिएकाे भन्दै उनले साउन २ गते राती सुसाइट नाेट लेखेर आ त्म ह त्या गरेकी हुन् ।
दुवैकाे डेटिङ भएकाे भन्दै अस्मिता सँगै गएका साथीहरु उनिहरुलाइ त्यहि गफ गर्न दिएर आफुहरु घर (श्रीनगर) फर्किए
अस्मिता घरकी एक्ली सन्तान हुन् ।
Previous articleआहा ! भगवान् जस्तो श्रिमानको काखमा अनिता यसरी रमाउदै (हेर्नुस् भिडियो )
Next articleएमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याए आगो बाल्छौं : महेश बस्नेत